Ithala elikhulu leqhwa laseLarsen C e-Antarctica lephukile | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba besiphawula muva nje ku- blog, ukuncibilika kushiya izwekazi lase-Antarctic lingabi neqhwa. Ezinsukwini ezimbili ezedlule, lokho osekubizwe nge- iqhwa elikhulu kunawo wonke emhlabeni: iLarsen C.
Isisindo samathani ayizigidigidi, wonke amehlo abesemgqolozele isikhathi eside. Futhi ingabe lokho, kuzokwenzekani manje? Okwamanje, i-Antarctica ngeke isafana; hhayi ngeze, ilahlekelwe ngaphezu kwe-12% yendawo yayo yeqhwa.
Iqhwa elikhulu leqhwa, yize belintanta isikhathi esithile, ngeke libe nomthelela oqondile olwandle; Manje ososayensi bakhathazekile njengoba sebethole ukuthi ukumbozwa kweqhwa e-Antarctica kungazinzile kangako kunakuqala kokuqhekeka, okusho ukuthi ama-icebergs amasha angakha esikhathini esifushane noma esiphakathi.
Isikhala sikaLarsen C besifundelwe isikhathi eside, selokhu ipulatifomu yakwaLarsen A yawa ngo-1995, kwathi ngo-2002 uLarsen B. Phakathi nonyaka, 2017, kusuka ngoJanuwari kuya kuJuni ubude be-Larsen C crack bunyuke ngaphezu kuka-200km. Yayinamathiselwe kuleli zwekazi ngocingo oluwu-4,5km ububanzi, kwaze kwaba ekugcineni, phakathi kukaJulayi 10 no-12, lwaqhekeka ngokuphelele.
Isithombe - Businessinsider.com
Akwaziwa ukuthi kuzokwenzekani kusukela manje; Cishe, iqhwa lizofohla libe izingcezu eziningi ezingagcina zibe nomthelela ezingeni lolwandle. Noma kunjalo, into ekhathaza kakhulu ukuthi uma izinga lokushisa lomhlaba liqhubeka nokukhuphuka, I-Antarctica ingaphela iqhwa.
Lokhu okutholakale ngokudabukisayo sikuthola nge-satellite yeSentinel-1 ye-European Space Agency, okuyiyona esetshenziselwe ukuqapha ukwakhiwa kokuqhekeka kukaLarsen C ngonyaka odlule, nakwisathelayithi i-Aqua MODIS nethuluzi leSuomi VIRS, zombili kusuka ku-NASA.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ishalofu elikhulu leqhwa laseLarsen C e-Antarctica liyaphuka